ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၁)
ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၁)
Posted by မောင် ပေ on Nov 29, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 32 comments
“ တူနယ့် တဲ့နယ် တူနယ့် တဲ့နယ် ဗြောင်နောင်နောင် ပေပေဂျိ ”
အဆိုပါ စကားလုံးများသည် ၊ ကျွန်ုပ် ၏ ဖုန်း အသံ ဖြစ်သည် ။ များသောအားဖြင့် ၊ ကျွန်ုပ်သည် နေ့ လည် ပိုင်းဆိုလျှင် ခဏအိပ်လေ့ ရှိသည် ။ အိပ်လျှင်လည်း ဖုန်းကို ဆိုင်းလင့် လုပ်ပြီးမှ အိပ်သည် ။ ယနေ့ တော့ ၊ အိပ်ချင်လွန်းသဖြင့် ၊ ဖုန်းကို ဆိုင်းလင့် မလုပ်ခဲ့သောအခါ ၊ ကျယ်လောင်သော ဖုန်းသံကြောင့် ကျွန်ုပ် အိပ်နေရာမှ လန့် နိုးမိတော့လေသည် ။
ဖုန်းကိုင်ဖို့ ၊ ခေါ်ဆိုလာသည့် ဖုန်းနံပါတ် ကို ကြည့်မိလိုက်တော့ ဂဏန်း ၁၄ လုံးလောက် ရှိသည် ။ သေချာပြီ ၊ အိုဗာစီး ကောလ် ။
ကျွန်ုပ်လည်း ဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားပြီး (ရွှေလီကိုသွားသော မိတ်ဆွေ ကို ကျွန်ုပ် ပစ္စည်း ရောင်းဖို့ လူကြုံပါးထားသည် ဖြစ်ရာ ၊ သူဖုန်းဆက်လျှင် တရုတ်ဖုန်း နှင့် ဆိုတော့ ) ၊ ကမန်းကတမ်း နှင့် အန်းစား ခလုပ် ကို နှိပ်လိုက်တော့ ၊
“ ဟယ်လို….ကိုပေလား ”
“ ဟုတ်ကဲ့… မောင်ပေ ပြောနေပါတယ် ”
“ ကျုပ် က ဦးစိုးမြင့်ပါ ၊ ရွှေလီထဲက ဆက်နေတာပါ ”
“ ဟုတ်ကဲ့…ဦးစိုးမြင့် ပြောပါ ၊ ကျုပ် ဘာများ ကူညီပေးရမလဲ ဗျ ”
“ ကျုပ် ဆီမှာ ၊ ညီလေး မောင်ပေ့ ဘော်ဒါ ရောက်နေတယ် ၊ ညီလေး ပို့ လိုက်တဲ့ ကျောက်စိမ်းကော ပါတယ် ၊ သူကတော့ ၅၀ ပြောနေတယ် ။ အဲဒါ ညီလေး ဘယ်ဈေးဆိုရင် ထုတ်မှာလဲ ၊ နောက်ဆုံးဈေးလေး သိချင်လို့ ပါ ”
“ အကို ဘယ်လောက်ကြိုက်တုန်း ၊ အကို့ ကြိုက်ဈေးပေးကြည့်လေ ”
“ ညီလေး..အကိုက ၁၅လောက်ဘဲ မှန်းတယ် ”
“ အာ ၁၅ တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး အကို ၊ ၂၅ နဲ့ ယူလိုက်ဗျာ ”
“ ၂၅ တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ၊ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် ၂၀ ဘဲ ယူလိုက်ပါ ၊ အဆင်ပြေလား ”
ကျွန်ုပ်လည်း ထခုန်မတတ် ပျော်သွားမိသည် ။ ဟုတ်တယ်လေ ၊ ၁ ကျပ် နဲ့ ဝယ်ထားသော ပစ္စည်းကို ၂၀ ရမယ် ဆိုတော့ ၊ ဒါနဲ့ 
“ ပွဲငြိမ်းဆိုရင် ထုတ်မယ်ဗျာ ”
“ ဟုတ်ပြီ ၊ ဒါဆိုရင် ၂၀ နဲ့ ယူလိုက်တော့မယ်နော် ၊ ညီလေး ဘော်ဒါနဲ့ ပြောဦးမလား ”
“ ရတယ် အကို ၊ မပြောတော့ဘူး ၊ ဒီကောင် တန်းပြန်လာမှာဘဲ ၊ ဒီရောက်မှ တွေ့ တော့မယ် ၊ ကျေးဇူးပါဘဲနော် ”
ဖုန်းချ ပြီးနောက် ၊ ကျွန်ုပ်လည်း ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာမိသဖြင့် ၊ ဆက်အိပ်လို့ မရတော့ဘဲ ၊ အိပ်ယာမှထ ၊ ရေချိုးအဝတ်လဲ ကာ ၊ အိမ်မှ ထွက်လာခဲ့သည် ။
အလုပ်မှ မြိုးမြိုးမြက်မြက်ကလေး ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ၊ လူလဲ မြောက်ကြွ မြောက်ကြွ ။
စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာဖြင့် ပျော်တာလိုလို ၊ တစ်ခုခု လုပ်ချင်တာလိုလို ဖြစ်နေသည် ။
ထိုင်နေကြ လဘက်ရည်ဆိုင်ကို ရောက်တော့ ၊ အိပ်ပက်လက် ကား ၂ စီး ထောင်ထားသူ ၊ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ဖြင့် ဆုံမိရာမှ ၊ အလာပ သလာပ ထိုင်ပြောကြရင်း ၊ မနက်ဖြန်ည သူ့ ကား ရန်ကုန် ဆင်းမှာမို့ ပြန်ဦးမည် ဟု နှုတ်ဆက်စကား ဆိုလာသည် ။
( မကြာသေးမှီ က ဖြစ်ထားသော နယူးဂိတ်မှ ကားအက်ဆီးဒန့် ကြောင့် ၊ သူရို့ ကားဂိတ်မှာ ခရီးသွားဖောက်သည်များ ထပ်တိုးလာသည် ဟု သိရသည် ။ သူရို့ ကားဂိတ်က နာမည်ရပြီးသား ဖြစ်သည် ။ ဒရိုက်ဘာ ၂ ဦး နှင့် ယာဉ်အကူ ၁ ဦး ပါမှ ကားဂိတ်က ထွက်ခွင့်ပြုသည် )
ရန်ကုန် ဆိုသည်ကို ကြားမိသည်နှင့် ၊ ကျွန်ုပ် ကို ဖိတ်ထားသော မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာတစ်စောင် ကို သတိရမိသွားသည် ။
သူငယ်ချင်းအရင်း တစ်ယောက် ၏ မင်္ဂလာဆောင် နှင့် မင်္ဂလာ ဆွမ်းကျွေး ကို ရန်ကုန်သို့ လာဖို့ ဖိတ်ထားသည် ။
နောက်ပြီး ကျွန်ုပ် ၏ မန်းဂေဇက်မှ မိတ်ဆွေဘော်ဒါများ ။
ရွှေလီက ဘော်ဒါ ပြန်လာလျှင် ၊ အာကေ ရမှာဆိုတော့ ၊ သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင် ကို သွားရင်း ၊ ရန်ကုန်က ဂေဇက်ဝင် မိတ်ဆွေများကို လည်းတွေ့ ဖို့ ရန်ကုန် ကို သွားမည် ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
ကားပိုင်ရှင်မိတ်ဆွေ ကို လက်မှတ်ကျန်သေးလား လို့ မေးကြည့်လိုက်တော့ ၊ သူ့ ဂိတ်ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး ၊ အိုခေ တဲ့ ။ ဒါဆို ၂စောင် ချန်ထားပေး ၊ မနက်ဖြန် ဂိတ်ရောက်မှ လက်မှတ်ဖြတ်တော့မယ် လို့ ။
ရန်ကုန်က ဂေဇက်ဝင်မိတ်ဆွေများအတွက် လက်ဆောင် ယူသွားဖို့ စဉ်းစားသည် ။ ဘာပေးရင် ကောင်းမလဲ ၊ ကျုပ်တို့ မြို့ က နာမည်ကြီး မုန့် ဝယ်သွားရင် ကောင်းမလား ၊ အင်း..သူရို့ ဆီမှာလဲ မုန့် အကောင်းစားတွေ တစ်ပုံကြီး ၊ နောက်ပြီး မုန့် လက်ဆောင်ပေးလျှင် စားပြီးလျှင် ပြီးပြီ ။ အမှတ်တရ ဖြစ်မှာက မုန့် စားလိုက်တဲ့ အချိန်ခဏတာလေး ဘဲ ။ ဒီတော့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ လက်ဆောင် အတွက် အကြာကြီး အမှတ်တရ ဖြစ်နေမည့် လက်ဆောင် ၊ ဘာပေးရင်ကောင်းမလဲ ။
“ စာအုပ် ” ပေးရင်ကောင်းမယ် ၊ ဟုတ်ပြီ… စာအုပ်ဆိုတော့ ၊ မပျောက်မပြဲ ရေမစို မချင်း ၊ ကျွန်ုပ် ကို အမှတ်ရနေကြပေမည် ။ နောက်ပြီး စာအုပ် ဆိုတော့ သယ်ရပြုရ လည်း လွယ်သည် ။
“လူထု” စာအုပ်တိုက် သို့ သွားပြီး ၊ မိတ်ဆွေများကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ စာအုပ် များဝယ်သည် ။
ကျွန်ုပ် အချိန်ပိုင်းကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးနေသော အလုပ်ရှင် ဆီ သို့ သွားပြီး ၊ ခရီးထွက်မည့် အကြောင်း ပြောပြရသည် ။ ခွင့်တောင်းသည့် သဘော ။
ညနေရုံးဆင်းချိန် ရောက်တော့ ၊ မိန်းမ ကို သူ့ ရုံးသွားကြိုရင်း ၊ မနက်ဖြန် ရန်ကုန် သွားမည့်အကြောင်း ကို ပြောပြလိုက်တော့ ၊ မိန်းမ က အံ့သြနေသည် ။
“ ယောက်ျားက တော့ အမြဲစိတ်မြန်လက်မြန်ဘဲ ၊ ကြိုပြောရင် မိန်းမလဲ ခွင့်ယူပြီး လိုက်လို့ ရတာပေါ့ ”
“ အခုလဲ မိန်းမ လိုက်ချင် လိုက်လို့ ရတာဘဲဟာ ၊ လက်မှတ်က ၂ စောင် ဝယ်ထားတယ် ”
“ အခုလို ကပ်ပြောတော့ ၊ ခွင့်က ဘယ်လိုလုပ် လွယ်မလဲ ယောက်ျားရယ် ၊ ထားပါတော့ ၊ လက်မှတ်က ၂ စောင်ကြီးများတောင် ဆိုတော့ ၊ ဘာသဘောလဲ ၊ ပြောစမ်းပါဦး ”
“ သြော်..ငါ့မိန်းမနှယ် ၊ တစ်ကယ်လို့ လက်မှတ်တစ်စောင်ဘဲ ဝယ်တယ်ထားပါတော့ ၊ ဘေးခုံ က ယောက်ျားချင်း အတူသွားရမှာ ဆိုရင် ထားဦး ၊ ဘေးခုံက ခရီးသွားဖော် က မိန်းခလေး ချောချောလှလှလေးဆိုရင် ၊ မင်း အပြစ်တင်ဦးမှာလား ”
“ အင်း..ဟုတ်တယ်..ယောက်ျားပြောတာမှန်တယ် ၊ တော်တယ်တော့ ၊ ဒါနဲ့ ဟိုရောက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ မှာ ဆိုတော့ ၊ သောက်ဦးမှာပေါ့ ”
“ အင်း..သောက်လဲ သုံးလေးခွက်ထက် ပိုမသောက်ပါဘူး ကွာ ၊ စိတ်ချပါ ၊ ယောက်ျားအကြောင်း မိန်းမ သိရဲ့ သားနဲ့ ”
“ သိတာပေါ့တော်..သိလွန်းလို့ ၊ ပြောနေရတာပေါ့ ၊ ကဲပါလေ…အခု ဘယ်ဝင်ဦးမှာလဲ ၊ အိမ်ရောက်မှ ယောက်ျားအဝတ်အိတ် စီစဉ်ပေးရဦးမယ် ၊ အိမ်ဘဲတန်းပြန်ကြရအောင်နော် ”
ညစာစားပြီးကြသောအခါ ခရီးသွားဖို့ လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်ကြသည် ။
အင်းကျီ ၊ ဘောင်းဘီ ၊ သွားတိုက်ဆေး ၊ ဆပ်ပြာ အစရှိသဖြင့် စီစဉ်ပေးပြီးသောအခါ ၊ ရန်ကုန်ရောက်လျှင် သွားဖို့ လာဖို့ တက္ကစီ ကိစ္စ ကို ပြောဖြစ်ကြသည် ။
ကျွန်ုပ် က အားနာတတ်သူ မို့ ၊ မိန်းမ က တက္ကစီခ ပိုမပေးရန် အထပ်ထပ်မှာသည် ။
မန်းတလေးသား တွေ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ၊ တက္ကစီ ဈေးဆစ်လို့ မရတာ တစ်ဒုက္ခ ဖြစ်သည် ။
ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားချင်းဆိုလျှင်တော့ ၊ ဘယ်တော့မှ ဈေးပိုပေးမစီးရ ၊ ဘယ်ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားမှ လည်း တက္ကစီ ငှားလျှင် ဈေးပိုမပေးပါ ။ ဘယ်နားသွားလျှင် ဘယ်လောက်ဘဲ ပေးရမည် ဆိုတာကို သိကြသည် ။
ကျုပ်တို့ မန်းတလေး က လူတွေများ ၊ ရန်ကုန်ရောက်လို့ တက္ကစီများ ငှားပြီဆိုလျှင် ၊ ဆရာ့ဆရာဒရိုက်ဘာများသည် ၊ ဈေးကို ၁ဆခွဲ ၊ ၂ဆ မျှ ပိုတောင်းကြတော့သည် ။
ဘယ်လောက်ဘဲ ရန်ကုန်သားပုံ ဖမ်းဖမ်း ၊ သူရို့ က လူမြင်လျှင် ၊ ရန်ကုန်က မဟုတ်မှန်း တန်းသိကြသည် ။
ဥပမာဆိုရလျှင် မန်းတလေးမှ ရန်ကုန်ကို အိပ်ပက်လက် ကားဖြင့် စီးသွားပြီး ၊ ရန်ကုန် အောင်မင်္ဂလာကားကွင်းရောက်ပြီ ဆိုပါတော့ ၊ ကားကွင်းထဲ ဂိတ်ဆုံးလို့ ၊ ကားပေါ်က ဆင်းပြီဆိုတာနဲ့ ၊ လူကို မဆွဲရုံတစ်မယ် တက္ကစီသမားများ ဝိုင်းအုံလာလိမ့်မည် ။
မျက်နှာချိုချို စကားချိုချို နှင့် ကားငှားဖို့ ခေါ်ကြလိမ့်မည် ။
သဘောကောင်းမည့် ပုံစံမြင်လို့ ၊ ဝမ်းသာအားရ လိုက်မသွားလိုက်နဲ့ ဦး ၊ ကားခ ဈေးအရင်မေးကြည့် ၊ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သား တစ်ယောက်ဆိုလျှင်တော့ ၄၀၀၀ကျပ် တန် ခရီးကို ၅၀၀၀ကျပ်ခန့် ပြောပြီးမှ ဈေးဆစ်ခံမည် ။ ပြီးလျှင် ၄၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် လိုက်ပို့ မည် ဖြစ်သည် ။
အဲ..ကျုပ်တို့ လို နယ်က ၊ အခြားမြို့ က လာသူ ဆိုလျှင်တော့ ၊ ၄၀၀၀ ကျပ်တန် ခရီး ကို ၈၀၀၀ တွေ ၁၀၀၀၀ တွေ လျှောက်အော်ပြီသာ မှတ်တော့ ။ ဆစ်လျှင်လည်း ၆၀၀၀ကျပ် အောက်ထစ်ဘဲ ။ ၂၀၀၀ ခန့် ပိုတောင်းသည် ။
ဟ..၄၀၀၀ ဘဲ ပေးရတာပါဟ ၊ ငါ့ဘော်ဒါက သေချာမှာလိုက်တယ် ၊ ၄၀၀၀ ထက်ပိုမပေးဖို့ ၊ မင်းမလိုက်နိုင်ရင် တခြားကား ငှားမယ် ကွာ ၊ ဟု ဆိုပြီး မငှားလျှင် ၊ ပွစိပွစိ ရွတ်ပြီး အခြားခရီးသည်ဆီ ပြောင်းရွှေ့ သွားမည် ။ အချဉ်ထပ်ဖမ်းမည် ။
တက္ကစီပေါက်ဈေးမသိသည့် နယ်ကခရီးသွား ဆိုလျှင်တော့ ၊ ခံပေတော့ဘဲ ။
မိန်းမ ကို တက္ကစီခ ပိုမပေးပါဘူး ဆိုတာ ကို ပြန်ကတိပေးမှ ၊ မိန်းမ လည်း စိတ်အေးသွားသည် ။ ယခင်တစ်ခါ က ကျွန်ုပ် တို့ လင်မယား အတူသွားခဲ့တုန်းက ၊ တစ်ရက်ထဲ တက္ကစီခ တော်တော်ပေးခဲ့ရသဖြင့် မိန်းမ က ရန်ကုန်က မိတ်ဆွေများကို ၊ တက္ကစီဈေးနှုန်း မေးကာ အလွတ်မှတ်ထားခဲ့သည် ။
“ အေးပါကွာ ၊ တက္ကစီခ အများကြီး မပေးရအောင် သေချာ ဈေးဆစ်ပါမယ် ၊ ဟုတ်ပြီလား ”
ညအိပ်ရာဝင်တော့ ၊ တော်တော် နှင့် အိပ်မပျော် ၊ သဘက်ခါ ရန်ကုန်ရောက်လျှင် ဂေဇက်ဝင် စာရေးဖော် မိတ်ဆွေများ နှင့် တွေ့ ဆုံရတော့မည် ဟု တွေးကာ ပျော်နေမိသည် ။
29/11/2011 ညကြတော့ ၊ အားလုံးအသင့်ဖြစ်နေပြီ ။ မိန်းမ က လိုက်ပို့ မည် ဇွတ်ပူဆာသော်လည်း ၊ ကျွန်ုပ်တို့ လင်မယားမှာ ကားမရှိသဖြင့် ၊ မိန်းမ ကို လိုက်မပို့ ဖို့ ပြောရသည် ။ အိမ်နှင့်ကားကွင်း က အဝေးကြီး ။
မိန်းမ တစ်ယောက်ထဲ ညကြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းဖို့ မသင့်တော် ။
သူငယ်ချင်း ကို ဆိုင်ကယ်နှင့်ဘဲ ကားကွင်း ပို့ ခိုင်းတော့မည် ဟု သူမ ကို လိုက်မပို့ ဖို့ ပြောရသည် ။
ကျွန်ုပ် သူငယ်ချင်း ရောက်လာတော့ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကားကွင်း သို့ မောင်းထွက်လာခဲ့သည် ။
“သြော်…ရန်ကုန်ကို သွားမည် ။ ရန်ကုန်ရောက်လျှင် မင်္ဂလာဆောင် သွားပြီးတာနဲ့ ၊ ဂေဇက်ဝင် မိတ်ဆွေများ နှင့် ဆုံမည် ။ ကဲမည် ။ လာပြီ.. ဘော်ဒါ တို့ ၊ မောင်ပေ လာပြီ ၊ ကောင်းကောင်း ဧည့်ခံဖို့ သာ ပြင်ထားကြပေတော့ ”
( ဆက်လက်တင်ဆက်မည့် အပိုင်းကို ဓါတ်ပုံများနှင့် တင်ဆက်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း )
——- ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ၊ မောင်ပေ ခရီးသွားမည့်အကြောင်း ၊ ခရီးသွားသည့်အကြောင်း များကို သည်းခံဖတ်ပေးကြသည့်အတွက် လေးစားကျေးဇူးတင်ပါသည် ——-
လာခဲ့.. လာခဲ့.. မောင်ပေလာရင် ဒီကနေ
ဆီ ၅၀သားနဲ့ ဘီယာတစ်စည် အသင့်မှာပေးထားတယ်။
ရပ်ကွက်ထဲက အထူးကျွမ်းကျင် အကြောပြင်ဆရာကို
စားအုန်းဆီနဲ့ ခရီးပန်းနေတဲ့ ကိုပေ့အကြောတွေကို
ဖြေခိုင်းဖို့ လက်သွေးခိုင်းထားတယ်… ဟီးဟီး..
ဘီယာတစ်စည်တော့ လောလောဆယ် စောင့်ရင်းနဲ့
မောင်ပေ ဒီနေ့ညစာ စားတယ်စောတယ်နော်……………………
ခရီးထွက်ရမှာဆိုတော့ သူ့ကို ၀အောင်ကျွေးလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်
ညစာလေးပေါ့ (ဟုတ်သေးပါဘူးလေ ) ကားပေါ်မှာ ဗိုက်မဆာအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် လောက်ပေးရယ်.. နားလည်လိုက်စမ်းဘာာာာာာာာာ
ဟယ် ခရီးသွားရင် ညစာ စောစောစားရတယ်လား … ကားကလဲ ထွက်ခါနီးပြီ ထမင်းကလဲ စားလို့မ၀သေး … အဲလိုဆိုရင်တော့ ခက်တော့မှပဲ …
လမ်းကျမှ ၀ယ်စားမယ် မိန်းမရယ်လို့ မှာခဲ့ရင် ကော ..
ရှင် ပြန်မလာနဲ့တော့လို့ ပြောမှာပေါ့နော် …
( မှတ်ချက် – ကိုပေ့မိန်းမသည် နှမျောတတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်)
သို့ကလိုကြောင့် ရက်ရောသည်ဟု ထင်မိကြောင်း
နာ့ ဘော်ဘော်တွေ ကိုတောင် အညိုညင်ခံပြီး အထိမခံတဲ့ နာ့မယား..(ကျနော့် 550D လေးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်)
နင့်ကို ငှားချင်တယ် ပြောတော့ …၇န်ကုန်သား စကား ဘာဖစ်တယ် ညာဖစ်တယ်နဲ့ …ဟွန်း…လူဇိုး…
နင်တင်ဆက်မယ့် …..ဒါ့ပုံတွေ ခွာလထီ မကောင်းလို့ကတော့ …. တွေ့မယ် …
ဟိတ်လူမှော်ဆြာ ..သည်လူရီးက ကပေါက်ဖော်နဲ့တွေ့ရင် စိတ်ချရဒါဟုတ်ဝူး…
ပုဆိုးကွင်းသိုင်း ကျင့်မယ့် သိုင်းသမားတွေ…
ခြေထောက်ကြီးပဲ ရိုက်လာတာတို့ …ခေါင်းမပါတာတို့
တခြမ်းတည်းတို့ လုပ်လာမှာ ပူတယ်ဗျ…
ခညားပါ လိုက်တွားပီး ရိုက်နှက်ပေးပါလားဂျာ….
စိုးတယ် စိုးမိတယ် …စိုးထိတ်မိတယ်……..
ဟုတ်ဒယ်။ ဟုတ်ဒယ်။ ဒီလူကြီး ရန်ကုန်မှာ အပြတ်ကဲမယ်လို့ကြိမ်းဝါးသွားတယ်။ တခြမ်းတွေ၊ တပိုင်းတွေ ကတော့ သေချာသလောက်ပဲ။
ဦးပေနဲ့တွေ့ချင်ပါသည်။ မုန့်လည်းဝယ်ကျွေးချင်ပါသည်။ ဦးပေ ရန်ကုန်ရောက်တုန်းကြာကြာတော့နေဦးနော်။ ၁၀ ရက်လောက်တော့ အချိန်ရတယ်မလား။
ဦးပေ ရဲ့ gmail လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးဦးလေ …ဒါမှဆက်သွယ်လို့ရမှာပေါ့….:)
ကိုပေ၊ ရန်ကုန်သွားမယ် ဆိုရင် မှာစြာလေးတွေ မှာလိုက်မယ်
ရောက်ရောက်ခြင်း ဆီ ၅၀သားနဲ့ ဘီယာတစ်စည် စောင့်နေမယ့် ဟိုလူကြီးတွေနဲ့ မတွေ့ခင် အန်ဒရယ်ကင်းအောင် ဖန်ခွက် စွယ်တော်လေး သွားဖူး ၊
မဒန်က Taxi ခပိုမပေးနဲ့ ဆိုလို့ ဆိုက်ကားလဲ စီးမနေနဲ့၊ စီးရင်လည်း စာရင်းစစ်ရုံးက ကားကြီးလာတာတွေ့ရင် ဆင်းပြေး
တစ်ကျပ်တန်ကို ၂၀ ရလို့ မြောက်ကြွကြွနဲ့ မြောက်ဥက္ကလာဖက်က စားသောက်ဆိုင်တွေလဲ မထိုင်နဲ့၊ ဟိုဓါးသိုင်း ၇ဖေါ် (ဟုတ်ပေါင်) ဓါးသမားရာကျော်နဲ့ တွေ့နေအုံးမယ်……….
ရုံးတွေလစ်ကာထွက် .. ဟီး ဟီး
ဟား ဟား…. နင်ဆီက ၂၀နဲ့ ဝယ်လိုက်တဲ့ကျောက်ကို ဝယ်လိုက်တဲ့ တရုတ်ကြီးဆိုတာ ငါကွ။ တကဲ့တရုတ်အစစ်ကြီးကို ပြန်ရောင်းတာ ၂၀၀တောင်ရတယ်။
လက်လီစိတ် ပြန်ရောင်းတဲ့ တရုတ်ကုမ္မဏီက နောက်ဆုံးရသွားတာ ၂၀၀၀၀။
ကြေးမုံလေးရေ…. နင့်အမျိုးတရုတ်ကြီးကို ငါမှမမုန်း ဘယ်သူမုန်းနိုင်မှာလဲ။ ကမ္ဘာမကြေ လက်စားချေမယ်ဟေ့… ကြေးမုံလေး ဂျီတော့မှာ ချက်ရအောင်နော်။
ကိုရင်ပေကြီး က ရန်ကုန်တောင် မရောက်သေးဘူး ရန်ကုန်သား (ကားသမားများ)တွေကိုဆော်သဗျ..
သူတို့မန်းလေး က ကားသမားတွေဆော်ချက်ကတော့..လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က မူဆယ်ကို ဗင်ကားလေးစီးသွားမိတာ..
၂၅၀၀၀/ ကို ၃၅၀၀၀/ တောင်းတာ ခံလိုက်ရပါရော..
ဒီတော့ ကိုပေကြီးရေ ကားသမားမှန်ရင် ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာ ကဖြစ်ဖြစ် အများစုက လူစိမ်းအပေါ် တနပ်စားတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်..
ဒါနဲ့ ကိုပေ့ ရေ ဆီစိမ်တဲ့ နေရာလေးတွေ ပြန်ရှယ်ပေးနော်… ဖြစ်နိုင်ရင်လိုက်ပြုစုချင်ပါတယ်ဗျာ..
ဓာတ်ပုံရိုက်ကြခါနီး xx နေရာမရသလိုဖြစ်ကြရသေးသည်ကိုလည်းအားနာရပါ၏။
ဟုတ်ဒလယ်.. ဘဘဖက်တီးရေ… လက်ဆောင်များအတွက်လည်း
ကိုပေ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ အင်မတန်ရုပ်ခံကောင်းသာကြောင့်
ဒဂုန်စင်တာ အသစ်ကြီးနှင့် ဘတ်ဂရောင်းထား ရိုက်ထားသော
ကိုရင့်တို့ ဂေဇက်ဖိုက်တာပုံကို ကြည့်လိုက်ပါက..
ရွာထဲမှ အမိုက်သားများ ပြန်ပြောဝံ့မည်တောင်မထင်… အဟီးး..
ဟီးဟီး .. ဘာဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးတွေ့ဆုံခြင်းပါပဲ …. ပထမတစ်ခါကတော့ …မန်းလေးသားကြီးလေးပေါက် … အခုတော့ ..ကိုပေ … ။
ဂေဇက်က နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ရန်ကုန်ရောက်လာတုန်း .. အမိအရ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ရတယ် ဟီးဟီး
ကိုရင် အီးတီရေ … မနာလို ဖစ်လိုက်တာနော်…
ကပေတယောက် ဘယ်လောက်တောင် ဖလန်းဖလန်း ထခဲ့မယ်….
ကိုယ်တွေအကြောင်း ဘယ်လောက်တောင် ၀ိုင်း အာဟိ လိုက်ကြမယ် ..
မသိဝူးဗျ နော့် ….
ဒါမျိုးပွဲတော့ အလွန်ဆင်နွှဲလိုပါ၏ ဗျာ …
သည်အကြောင်းတွေ ဘယ်သူ ပို့စ့်အရင် ရေးတင်လာမလဲ မျှော်နေမိပါသည်….
ဟုတ်ပါ့။ ပြန်လာပါတော့မယ်ဆိုမှ ဒီလူကြီးတွေ ၁၅ ရက်လောက်တောင် မစောင့်ဘူး။ ၃လပိုင်း ရောက်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အလှည့်ပေါ့ဗျာ
အိပ်နေတဲ့ ၄နာရီ အတွင်းမှာ ဘယ်သူက အနီတွေပြသွားပါလိမ့်။ အနီထိတဲ့သူတွေ အများကြီးပါလား။ တခြားပိုစ့်တွေမှာပါ အနီတွေပေးသွားတယ်။ မနေ့ ကတွေ့ ဆုံပွဲလေးကို မကျေနပ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မသွားရပါဘူးဗျာ အားမငယ်ပါနဲ့ 
ဘာပဲ..ပြောပြော…ကိုပေ သွားမယ့် ခရီးစဉ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ လည်း လိုက်ပါလာပါပြီ။
1 ပြီးရင်2တွေ3တွေ နဲ့ ဆက်ပါဦးဗျ။
ရုန်ကန်….အဲ…ဟုတ်ပါဝူး ယောင်ရို့….ရန်ကုန်က အဖွဲ့တွေ မေပောင် မောင်ပေရောက်လာရင် ၀မ်းတန်းနှုတ် ပြီးရင် ကောက်ညှင်းပေါင်းအ၀ကျွေးထား……။ နေ့မကူးစေနဲ့…..။ ဟာ ….ဟုတ်သေးပါဘူး ငါ့မောင်ပေလေး သနားပါရဲ့ ….။ အဲဂလိုမလုပ်ကြနဲ့နော်………….. နေပြည်တော်လာမှ ငါလုပ်မယ်……..အဲဂလို……..ဟင်းးးး ငါ့နားက ဖြတ်သွားပြီး ၀င်နှုတ်ဆက်မသွားဘူး…။ ချိတ်ရှိုးတယ်…။ ထော်တော့ဘူး
ကိုပေရီးကျေးဂျူးနဲ့ ..အနော်လဲ. ရွာထဲက..ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေနဲ့ဆုံခွင့်ရလို့ ….
ညက ဆွဲခဲ့တဲ့ ခွက်တွေ ဖောင်လုပ်စီးရင်တောင် သမုတ်ဒယာဂျီးဖြတ်ပြီး..
သဂျီးဆီ အလည်သွားလို့ ရတယ်…..
အမောင်ပေ၏ ရန်ကုန်ခရီးစဉ် အဆင်ပြေပါစေနော့
ပေါက် ပေ လူး စည် အနက်ရောင် သိုင်းသမားလေးယောက်သာ ဆုံပေလို့
၇ ဖော်ဆုံသွားရင်တော့ သင်္ဘောဆောက်ပြီး ကမ္ဘာပတ်လို့ရတယ်.. အဟီးး
ကိုပေ တိုက်ပေးထားတဲ့ live up အသဲအားဆေးကြောင့်
ခုဆို ကိုရင် ထောင်ထောင်မတ်မတ် ပြန်ဖြစ်လာကြောင်း
ပေါက်/လူး/စည်/ကမ်း/ချော/…လိုက်လို့မမှီဘူး 77တပ်မနဲ့ ၀င်ဝိုင်းတာတောင်
အထက်ဖော်ပြပါ မန်တလေး မှကျောက်စိမ်းသူဌေးဦးဆောင်ကာ ပဲလင်းမွေသီး၏ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်မှုကြောင့်
မန်းဂေးဇက်၏ ရွာတွင်းရွာပြင် ရွာစဉ်ရွာထိပ် ရွာတစ်ပိုင်စားကြီးပါမကျန် နေထိုင်ကြကုန်သော
ဘီယာဆိုင် မီတင်မှ ပေါက်/ပေ/လူး/စည်/ကမ်း/ချော နှင့်77တို့မှ
သတင်းအပြည့် အစုံအား SB မဲချောမှ ဆက်လက် တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းးးးးးးးး
အိပ်ယာက နိုးလာကြပြီကိုး။ တို့တော့ ခေါင်းတွေကိုက်လို့ မျက်စိတွေလေးနေပြီ။
ညက ဘယ်နှခွက်တောင် ခွက်လိုက်မိသလဲမသိပါဘူး။ ဘီလူးကြီးတောင် လန့်ပြီးပြေးသွားတာပဲ။
မဆုံလိုက်ရမရှိအောင် … ဦးလေးဖုန်းနံပါတ်ကို ကိုဘီလူးဆီပေးခဲ့တာ …. ခေါင်းကိုက်သွားတာကိုး ဟီးဟီး
အရမ်းစွတ်ချတာလေ ဘီယူး ကတော့ ဘီယာနဲ့အတည့်လိုမသောက်တော့ပဲ
“တားတား” ဖာသာ ပြန်ယာတာပေါ့ ဒီလူကြီး အပြောကောင်းအရစ်ကောင်းကြီး…ကြောက်ကြောက်
သူစတဲ့ ဇာတ်လမ်း သူက ပြေးပြီးတော့။
ဘီယာနဲ့မတည့်တာလား မိန်းမ ဆူမှာကြောက်တာလားမသိဘူး။
မတည့်လို့ပဲ တည့်များတည့်ရင် ဘောက်ဆာဘေးထားပြီး သောက်မယ်ထင်တယ်။
ဘာများရစ်မိလို့လည်းဗျာ…။ မူလကိုက မရစ်တတ်ပါဘူးဗျာ။
ကလေးတွေနဲ့ ထိုင်တာဆို ပိုတောင် ဘာရစ်ရမှာလည်း။
ကိုပေရေ့ ကျုပ်လည်း မန်းလေးကိုဆင်းခဲ့တော့မယ် ပြီးမှ မန်းလေးမှာ ကိုရမ်ဘိုကြီးဆိုင်ကိုကြွမယ်နော…..